परिवारमा शिशुको आगमनले खुसी छाउनु स्वाभाविक हो । यद्यपि यो खुसी त्यसबेला मात्र र्सार्थक हुन्छ जब शिशुलाई निरोगी बनाएर हर्ुकाइन्छ । एक वर्षम्मकालाई शिशुको संज्ञा दिइन्छ । कतिपय अवस्थामा जन्मिएका शिशुहरू स्वस्थ हु“दैनन् । कतिपय अवस्थामा आमा तथा परिवारका सदस्यको लापरबाहीका कारण शिशु अस्वस्थ हुन्छन् । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा अहिले शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार आएको बालरोग विशेषज्ञ डा. विष्णुप्रसाद पण्डितको अनुभव छ ।
सरकारले सन् २००६ मा गरेको र्सर्वेक्षणअनुसार शिशुको जन्मदर २८ छ । सहरी क्षेत्रमा २१ छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २९ छ । पहिले जीवित प्रतिहजार शिशुमध्ये ६४ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो भने हाल यो संख्या घटेर ४८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै पहिले पा“च वर्षउमेरमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ९१ थियो भने हाल ६१ छ । यो संख्या घट्नुमा जनचेतना एवं शिक्षाले महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेको डा. पण्डित बताउ“छन् । शिशुहरू जन्मनेबित्तिकै मर्नुमा अस्पतालको सेवा नलिनु वा लिन नसक्नु पनि प्रमुख हो । गर्भवती महिलालाईं अस्पतालसम्म पुर्‍याउन ढिला भएको कारण पनि शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ गर्भावस्थामा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनर्ुपर्छ । पहिले महिलाहरू अनभिज्ञताका कारण सुत्केरी पनि घरमै गराउ“थे । यसले गर्दा आमा तथा शिशुको मृत्यु हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्थ्यो । अहिले यो अवस्था छैन । स्वास्थ्य संस्थामा गई सुत्केरी गराउनेको संख्या २२ प्रतिशत छ । नेपालको प्रजननदर ३ प्रतिशत छ । शिशुलाई ६ महिनासम्म स्तनपान गराउने ५३ प्रतिशत छन् । ६ महिनादेखि ५ वर्षम्मका ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिएको छ ।
बालबालिकालाई जन्म दिएर मात्र आमाबुवाको कर्तव्य पूरा हु“दैन । उनीहरूलाई स्वस्थ बनाई हर्ुकाउनर्ुपर्छ । पहिलो पा“च वर्षा शिशुलाई बढी रोगले सताउने काठमाडौं मेडिकल कलेजका चिकित्सक विनोदलाल बज्राचार्य बताउ“छन् । यो उमेरमा बालबालिकाको रोगस“ग लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ र रोगले छिट्टै समात्ने सम्भावना हुन्छ । यो उमेरमा धेरैजसो श्वास-प्रश्वास एवं पेटसम्बन्धी रोग लाग्छ ।
बालबालिकालाई समय-समयमा रोगविरुद्ध लड्ने खोपहरू चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम दिनर्ुपर्छ । नेपाल सरकारको सन् २००६ को स्वास्थ्य र्सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रका ८३ प्रतिशत बालबालिकाले यो सेवा लिएका छन् ।
बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोपहरू
बीसीजी : शिशु जन्मनासाथ बीसीजी खोप दिइन्छ । नेपाल सरकारले सन् २००६ मा गरेको र्सर्वेक्षणअनुसार ९१ प्रतिशत शिशुले बीसीजी खोप लिएका छन् । यसले शिशुलाई क्षयरोग लाग्नबाट बचाउ“छ ।
डीपीटी : ग्रामीण र सहरी गरी ८४ प्रतिशत शिशुले यो खोप लिएका छन् । यसले भ्यागुते रोग, लहरेखोकी तथा धनुष्टंकार रोग लाग्नबाट जोगाउ“छ । यो खोप शिशु जन्मिएको ६ हप्तादेखि एक वर्षभत्रमा १/१ महिनाको फरकमा दिनर्ुपर्छ ।
पोलियो : पोलियो थोपा खाने शिशु पनि ८४ प्रतिशत छन् । यसले शिशुको शरीरमा पोलियो रोगस“ग लड्नसक्ने शक्ति प्रदान गर्छ ।
दादुराको खोप : दादुराको खोप ९ महिनामा दिइन्छ । यो खोप लिने शिशुहरू ८३ प्रतिशत छन् । यसले शिशुलाई दादुरा रोग लाग्नबाट बचाउ“छ ।
हेपाटाइटिस बी : ६९ प्रतिशत शिशुले हेपाटाइटिस बी लिएका छन् । यो खोप पहिले दिएको एक महिनापछि दोस्रो र ६ महिनापछि तेस्रो मात्रा दिनुपर्छ ।
बालबालिकालाई लाग्ने रोगहरू
चिकित्सकहरूका अनुसार बालबालिकालाई र्सर्ने तथा नर्सर्ने गरी दर्ुइ किसिमका रोग लाग्छन् । र्सर्ने रोगअर्न्तर्गत रुघाखोकी, निमोनिया, लहरेखोकी, भ्यागुते रोग, धनुष्टंकार, दादुरा, पोलियो जन्डिस, क्षयरोग, टाइफाइड, झाडापखाला आदि पर्छन् । त्यस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, रुमेटिक ज्वरो, मिर्गौलासम्बन्धी रोग नर्सर्ने रोगमा पर्छन् । र्सर्ने वा नर्सर्ने दुवै किसिमका रोग लाग्नुमा आहारविहार, विलासी जीवन, व्यायामको कमी, प्रदूषण तथा दूषित हावापानीलाई मुख्य मानिन्छ । पहिलेभन्दा अहिले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको बताउ“दै डा. बज्राचार्य भन्छन्, ‘हि“जोआज आमाहरूमा जनचेतना बढ्नुका साथै चिकित्सकको संख्या पनि बढेको छ अनि स्वास्थ्य संस्थाको बिस्तार भएको छ । शिशुलाई केही भए छिट्टै स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउने कारणले गर्दा पनि शिशुलाई रोगले बढी समयसम्म सताउन पाउ“दैन ।’
आमाबुवाले मोटो शिशु मन पराउने हुनाले अहिलेका शिशुमा मोटोपन पनि बढ्दै गएको छ । खानपानले पनि शिशुलाई मोटो हुन सघाएको छ । धेरै मोटो हुनु पनि स्वास्थ्यको दृष्टिले हानिकारक हुन्छ । प्रत्येक १ हजार जीवित शिशुमा ७६ जना शिशु १ वर्षनपुग्दै मर्छन् । आमा र शिशु दुवैको कारणले शिशुको मृत्यु हुन्छ । चिसो भएमा, दूध नख्वाएर, जन्मदा निस्सासिएर तथा नाइटो पाकेर शिशुको मृत्यु हुन्छ ।
शिशुलाइ हाइपोथर्मिया हुने कारण
नवजात शिशु जन्मनुभन्दा पहिले आमाको न्यानो गर्भाशयमा हुन्छन् । न्यानो गर्भाशयमा रहेका शिशु जन्मदा बाहिरी वातावरणमा छिटो चिसो हुनसक्छ । यसले गर्दा शिशुलाई हाइपोथर्मिया हुनसक्छ । प्रसव कोठा वा शिशु रहने कोठा चिसो हुनु, शिशु जन्मनासाथ वा पछि न्यानो लुगा नलगाइदिए हाइपोथर्मिया हुनसक्छ । कम वजन भएका र समय नपुगी जन्मिएका शिशुमा यो समस्या बढी देखिन्छ । अपांग शिशुलाई पनि हाइपोथर्मिया हुनसक्छ ।
लक्षणहरू : शिशुले राम्रोस“ग दूध चुस्न सक्दैन । ऊ कम रुनुका साथै हातखुट्टा पनि कम चलाउ“छ । रगतमा चिनीको मात्रा कम हुने तथा अम्लीय मात्रा बढी हुन्छ अनि संक्रमण हुन्छ । फोक्सो तथा नसाबाट रक्तस्राव हुन्छ, त्यसपछि शिशुका हातखुट्टा कडा हुन्छन् ।
उपचार : प्रसवकक्ष न्यानो राख्नर्ुपर्छ । प्रसवकक्षको तापक्रम कम्तीमा २५ ड्रि्री सेन्टिग्रेड हुनर्ुपर्छ । जन्मिसकेपछि सकेसम्म छिटो नरम र न्यानो कपडाले पुछिदिएर अर्को न्यानो र नरम कपडाले राम्रोस“ग बेरिदिनर्ुपर्छ । सकेसम्म छिटो शिशुलाई आमाको दूध ख्वाउनर्ुपर्छ । त्यस्तै जन्मपछि आमा र शिशु दुवैलाई न्यानो कोठामा राख्नर्ुपर्छ । शिशुको शारीरिक तापक्रम थाहा पाउन बारम्बार हातखुट्टा छामिरहनर्ुपर्छ । शिशुलाई न्यानो तापमा राख्नर्ुपर्छ ।
निमोनिया : निमोनिया श्वासप्रश्वाससम्न्धी रोग हो । यो रोग लाग्दा शिशुलाई खोकी लाग्छ, ज्वरो आउ“छ र सास फर्ेन गाह्रो हुन्छ । छिटो-छिटो सास फर्ेछ । एक मिनेटमा एक वर्षो शिशुले ५० देखि ६० पटकसम्म सास फेरेमा छिटो सास फेरेको मानिन्छ । डा. विनोदका अनुसार शिशुले प्रतिमिनेट ४० पटकभन्दा कम सास फेरे निरोगी मानिन्छ । शिशुको कोखा हान्नुलाई पनि निमोनियाको लक्षण मानिन्छ । शिशुले सास लि“दा छातीको तल्लो भाग र पेटको माथिल्लो भागको छालाभित्र पसेमा कोखा हानेको हुन्छ । स्वस्थ शिशुले सास लि“दा छातीको तल्लो भागको छालाका साथै छातीको सम्पर्ूण्ा भाग बाहिर आउ“छ । नङ तथा ओठ नीलो भए बिरामी गम्भीर भएको हुन्छ र अक्सिजन नै दिनर्ुपर्छ । यी लक्षण देखापर्नासाथ शिशुलाई जतिसक्दो छिटो अस्पताल पुर्‍याउनर्ुपर्छ ।
शिशुमा उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह
युवा र वृद्धालाई मात्र उच्च रक्तचाप हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ । बालबालिकामा पनि यस्तो समस्या पाइन्छ । अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडिएटि्रक्सका अनुसार प्रत्येक १ सय जना बालबालिकामध्ये पा“च जना बालबालिकामा उच्च रक्तचाप देखिएको थियो । नेपाली बालबालिकामा पनि उच्च रक्तचाप देखिएको छ र यो मिर्गौलास“ग सम्बन्धित हुन्छ । त्यस्तै रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, श्वासप्रश्वासको कमी र मोटोपन उच्च रक्तचापको लक्षण मानिन्छ । बालबालिकामा उच्च रक्तचाप भएमा आफै ठीक हुन्छ । पछिसम्म यो रोग रह“दैन । कुनै-कुनै मुटु रोगले पनि यो समस्या देखिने गरेको डा. विनोद बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै मधुुमेह पनि कमै बालबालिकामा देखिएको छ । बालबालिकामा एकपटक मधुमेह देखिए जीवनभरि इन्सुलिन दिनुपर्ने हुन्छ । ६-७ वर्षो उमेरमा पनि मधुमेह देखिएको छ तर यो संख्या त्यति धेरै छैन । कुनै शिशुलाई गम्भीर रोग लागेको छ भने उपचारपछि उक्त रोग निको हुन्छ र पछि मधुमेह देखिने सम्भावना रहन्छ तर सबै शिशुमा यो लागू हु“दैन । नेपाली बालबालिकामा मधुमेह त्यति धेरै नदेखिएपछि अन्य मुलुकका बालबालिकामा भने मधुमेह देखिएको छ । इंग्ल्यान्डमा १ लाख बालबालिकामध्ये १७ जनामा मधुमेह देखिएको छ । त्यस्तै स्कटल्यान्डमा १ लाखमध्ये २५ जना शिशुमा मधुमेह देखापरेको छ भने फिनल्यान्डमा ४३ जना बालबालिकामा मधुमेह पाइएको छ । जापानमा १ लाखमध्ये ३ जना बालबालिकामा मधुमेह देखिएको छ । मधुमेह हुनुको पछाडि वातावरणीय प्रभाव प्रमुख रूपमा देखापरेको छ । तिर्खा लाग्नु, वजन कम हुनु तथा थकाइ लागेमा मधुमेहको लक्षण मान्न सकिन्छ । बालबालिकामा यी लक्षणका साथै पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने वा व्यावहारिक समस्या पर्दा पनि मधुमेह हुने सम्भावना रहन्छ ।
प्रत्येक आमाबुवाले शिशुलाई सही रूपमा लालनपालन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा रोग लाग्ने सम्भावना कम रहन्छ । यसका लागि सही खानपानका साथै शुद्ध पानी ख्वाउनर्ुपर्छ । साथै सफा-सुग्घर पनि राख्नर्ुपर्छ । शिशुलाई दिइने खोपले पनि उसलाई रोगविरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता बढाउ“छ । बिफर रोग विश्वबाटै उन्मूलन भैसकको छ भने पोलियो उन्मूलनको क्रममा छ । पोलियो खोप लगाउ“दा शिशुलाई पोलियो रोग हुनबाट बचाउ“छ । त्यस्तै हेपाटाइटिस बीले गम्भीर खालको जन्डिस हुनबाट बचाउ“छ । बीसीजीले टीबी रोगीको संख्या घट्दै गएको छ भने डीपीटीले लहरेखोकी, भ्यागुते रोग तथा धनुष्टंकारका रोगीको संख्या कमी भएको छ । दादुराको खोपले दादुराबाट हुने जटिलता, निमोनिया तथा आउ“मा कमी भएको छ । यी खोपले रोग लाग्नबाट बचाउने हुनाले शिशुलाई अनिवार्य रूपमा खोप दिनर्ुपर्छ । शिशुलाई साधारण ज्वरो आए घरमै पानीपट्टी दिन सकिन्छ । त्यस्तै खोकी लागे तातोपानी ख्वाउन सकिन्छ । गम्भीर खालको बिरामी भए जतिसक्दो छिटो अस्पताल पुर्‍याउनर्ुपर्छ ।